Slit Polyester ဖဲထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ | တရုတ်အလွှာ Polyester ဖဲစက်ရုံ
အပူလွှဲပြောင်းအလွှာ Edge Polyester ဖဲ
Care Label Printing အတွက်အပူလွှဲပြောင်းဖြတ်ပိုင်း Polyester ဖဲ ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
အရောင်များအလျားလိုက်အပေါက် Edge Polyester Satin
Care Label Printing အတွက်အရောင်များ Slit Edge Polyester Satin 1. ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
Care Label Printing အတွက်အလွှာ ၁.၃ Polyester ဖဲ Recycle Slit ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
လူပျိုဘေးထွက်အလျားလိုက်အပေါက် Edge Polyester ဖဲ
စောင့်ရှောက်ရေးတံဆိပ်ပုံနှိပ်သည်တစ်ခုတည်းဘေးထွက်အလျားလိုက်အပေါက် Polyester ဖဲ 1. ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
Semi-Dull အလျားလိုက်အပေါက် Polyester ဖဲ
စောင့်ရှောက်ရေးတံဆိပ်ပုံနှိပ်သည် Semi-မှိုင်းအလျားလိုက်အပေါက် Edge Polyester ဖဲ ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
Full- မှိုင်းအလျားလိုက်အပေါက် Edge Polyester ဖဲ
Care Label Printing ကိုအလွယ်တကူဖြတ်တောက်နိုင်သော Polyester Satin ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
နောက်ကျော Coated အလွှာ Edge Polyester ဖဲ
နောက်ကျော Coated အလွှာ Edge Polyester ဖဲ 1. စောင့်ရှောက်ရေးတံဆိပ်ပုံနှိပ်သည်။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
နှစ်ဘက်ဘေးထွက်အလျားလိုက်အပေါက် Edge Polyester ဖဲ
Care Label ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်နှစ်ဖက်ဘေးအလျားအမြင့်ဆုံး Polyester ဖဲ ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
Care Label Printing အတွက်မီးလျှံဆန့်သည့်အစိုင်အခဲ ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။